Yonke into ekufuneka uyazi malunga nokuhamba eYurophu | Gcina A Isitimela
Order A Train iTikiti NOW
Thenga Amatikiti kaloliwe
Uluhlu lokuHlola lokuHamba
ekhaya > Travel Europe > Yonke into ekufuneka uyazi malunga nokuhamba eYurophu
Yonke into ekufuneka uyazi malunga nokuhamba eYurophu
yi U-Ela Williams
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 01/04/2021)
Masithi uceba ukutyelela i-European Union nanini na kungekudala. Kwityala, kukho uthotho iingcebiso kunye ulwazi olubalulekileyo lokuhamba eya kunceda ukwenza amava akho abe mnandi ngakumbi. Umntu unokucinga ukuba akunakubakho umohluko omkhulu ngokwenene kwi Ukuqwalaselwa okuyimfuneko ukuya eYurophu ngokuthelekisa nayiphi na enye indawo emhlabeni. kunjalo, kulwandiso olukhulu lwayo, kukho uthotho lwamaphepha asemthethweni onokuthi ufune ukungena eYurophu njengomkhenkethi. kwakhona, Imozulu ezohluke kakhulu, quirks, kunye neenkcubeko ezithile zibalulekile ukugcina engqondweni apho.
izithuthi kaloliwe yeyona ndlela indalo ahambe. Eli nqaku yabhalwa ukuba afunde Train Travel kwaye wenziwa ngu Gcina A Isitimela, Engambi Train Amatikiti Website In The World.
1. Ukuya EYurophu: Bamba iPasipoti yakho
Ipasipoti yeyona nto iphambili kuyo kuba iya kuba yikhadi lakho lomboniso kunye nesitshixo kwilizwe lakho lokufumana. Siza kujonga ipasipoti kuqala. Urhulumente wakho ophambili umisela ukuba leliphi na ilizwe oya kuthi ungene kulo ngaphandle kokuqhubekekisa naluphi na uxwebhu olukhethekileyo. Kuhlala kulunge kakhulu ukujonga ukuba ikhaya lakho kunye noonozakuzaku bakho bagcine ubudlelwane bezopolitiko okanye isivumelwano ngexesha lokuhamba. Uninzi lwamazwe asuka eMelika nakuMzantsi-mpuma weAsia akanakulawula ukufikelela kumazwe amaninzi aseYurophu.
Ndithethile oku, ukuba akunjalo; fumana umcebisi wohambo olusemthethweni onokukukhokela ngelixa uqhuba amaphepha mvume okuhamba. Unokufuna iziqinisekiso zempilo kwaye unikwe ukufikelela kuzo. Ukuba uthanda ukuqhuba ngelixa uphesheya, Uyakufuna kwakhona Imvume yokuqhuba yamanye amazwe. Ukuba ucwangcisa ukwenza ishishini, zisenokubakho nezinye iimvume zamanye amazwe ezifunekayo zokuhamba. Ungajonga ukuba leliphi iphepha elifunekayo ngokwenjongo yakho yokuhamba kwiwebhusayithi karhulumente yelizwe elamkelayo.
ILyon ukuya eTououse ngeTreyini
EParis ukuya eTououse ngeTreyini
Kumnandi eTououse Ngololiwe
IBordeaux ukuya eTououse Ngololiwe
2. Funda ukupakisha ngokufanelekileyo
IYurophu lilizwekazi elikhulu nelezahlukeneyo, ukusuka kwiilwandle zaseAndalucia ezinelanga eSpain ukuya kwimpuma yeTundra esempuma. Kubalulekile ukupakisha kunye nemozulu engqondweni kunye nemisebenzi oya kuthi ucwangcise ukuyenza phesheya. Khumbula ukuba awupakisheli ukuphuma kwilizwe lakho, ungathathi kakhulu okanye kancinci; oku kuyakwenza ukuba uphulukane nexesha elincinci lokukhetha iimpahla, ndikuncede kwindlela eya kwisikhululo seenqwelomoya, kwaye nkqu kukongela imali yi ukunqanda umrhumo wokutyeba kakhulu. Eyona nto ingcono kukuququzelela ibhegi yakho yokuhamba okanye ityesi yomkhosi, uqengqa iblukhwe yakho, iihempe, iikawusi, neengubo zangaphantsi ezinjenge-croissant kwaye uzibeke zonke zishinyene. Oku kuthintela ubunzima bokugoba iimpahla zakho kunye nokugcina indawo ukuze ulungele iimveliso zempilo okanye zombane. Le ngcebiso iluncedo kwakhona ukuba ujonge ukuzisa iimpahla ozithengileyo kuhambo. Elinye icebo elilungileyo kukupakisha ibhegi eyongezelelweyo yesipho sakho okanye izinto zokuthenga.
I-Amsterdam isiya eParis ngoololiwe
ILondon iye eParis ngoololiwe
IRotterdam ukuya eParis ngoLoliwe
IBrussels yaya eParis ngoLoliwe
3. Ukuya EYurophu: Vumela iiBhanki zakho zazi ukuba uza kuba kwelinye ilizwe kunye nokuchitha
Ukuhlaselwa kwamakhadi okuthenga ngetyala okwenzeka kwiminyaka embalwa edlulileyo kwenza ukuba iibhanki ziwulumkele umngcipheko. Kubakhokele ekubeni baseke ibhloko kuqala buza umgaqo-nkqubo kamva xa bebona ikhadi lesikweletu lisetyenziswa kwilizwe elingahleliwe. Kuya kufuneka ubonakale buqu kwibhanki yakho okanye ubanike umnxeba kuba izaziso ezikwi-Intanethi ngamanye amaxesha azithathelwa ngqalelo. Ukuthabatha eli lungiselelo kuya kuthintela amava anobungozi kunye neentloni ngelixa uthenga. Ukuba uya ebhankini ikwalicebo elilungileyo ukufumana imali yendawo ngelixa ulapho. Imali yotshintshiselwano inyuselwa ngokungenangqondo kubakhenkethi uninzi lwevenkile zaseYurophu kwaye ukutshintshiselana ngamanqaku.
ISalzburg iya eVienna ngoLoliwe
EMunich ukuya eVienna ngoLoliwe
I-Graz eya eVienna ngoLoliwe
Prague eVienna ngoololiwe
4. Ukuya EYurophu: Ukuphindaphinda
Ukuba uya "kwilizwekazi elidala,”Khumbula ukuza namaxwebhu akho uze uhlawule naluphi na uhlobo lweemvume zamazwe ngamazwe ezifunekayo. Olu hlobo lwephepha lubalulekile ukuba ucwangcisa ukutyelela amazwe ahlukeneyo ngaphakathi umthetho waseYurophu. Ukuba uceba uhambo lwendlela, Kuyimfuneko ukuba nemvume yokuqhuba yamazwe aphesheya kwaye uphephe ukubhukisha. kwakhona, khumbula uku pakisha kancinci kwaye ujonge imozulu kunye nezinto oza kuzinyamezela phesheya. Soloko unika ingxelo ukuba ngawaphi amazwe oceba ukuchitha imali kuwo kwaye wenze notshintshiselwano lwemali kuphela ngezinto ezigunyazisiweyo. Ekugcineni, unxibelelana nabantu abohlukeneyo, ukudla, iinkcubeko, ungalibali ukonwaba kwaye wonwabele amava.
IDusseldorf eMunich ngoLoliwe
Dresden eMunich ngoLoliwe
ENuremberg eMunich ngoLoliwe
Bonn eMunich Ngololiwe
Ngoku uyazi yonke into ekufuneka uyazi, thina apha Gcina A Isitimela, zikulungele ukukunceda ngazo zonke ezinye iimfuno zakho zikaloliwe.
Thatha Poll yethu
Ngaba ufuna ukufaka iposti yethu yebhlog "Yonke into ekufuneka uyazi malunga nokuhamba eYurophu" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feverything-know-traveling-europe%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uzakufumana iindlela zethu ezithandwa kakhulu kuloliwe - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml.
Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, kwaye bangatshintsha iilwimi / fr ukuba / es okanye / de yaye ngaphezulu.
Udibano lwaseyurophu eurotrip ulwazi UkuhambelaUlou traveltips
U-Ela ngummeli wezohambo. Umnqweno wakhe wokuhamba wenyuka xa wayemncinci ke, waba yiarhente yokuhamba ukuze akwazi ukubonelela ngolwazi, Ingcebiso, kunye neenkonzo zokubhukisha zabantu abanqwenela ukuhamba. Ngexesha lakhe lokuphumla, Uyakuthanda ukufunda kwaye ngakumbi abo ngamabali ahambelana nokuhamba. Uvuyo kunye noxabiso lokuhamba kwamenza ukuba aqale ukubhala ngamava akhe ngendlela anokunceda ngayo abanye abathandi bokuhamba - Unako cofa apha ukuze Nxibelelana noRebecca
Best Cross Umda Trains Ukuze Thatha EYurophu
Uloliwe wokuhamba eBelgium, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Train Travel Holland, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe eSpain, Uloliwe eSwitzerland, Travel Europe
10 Charming Castles In France By Train
Qeqesha uhambo eFrance, Iingcebiso zokuhamba, Travel Europe
7 Ezona ndawo zintle Zamanzi eYurophu
Qeqesha ukuhamba iOstriya, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe eSwitzerland, Travel Europe
Shiya lo mhlaba engenanto ukuba sele yabantu:
Iindawo ezimnandi zokundwendwela kuhambo lwakho lokuZazisa
12 Uninzi lweentaba ezintle eYurophu
10 Iindawo ezimnandi ze-LGBT eziHlobo
Ukufumana Iphupha laseYurophu: 5 Kufuneka-utyelele amazwe
12 Izilwanyana ezizodwa ukujonga eYurophu
copyright © 2021 - Gcina A Isitimela, Amsterdam, elamaDatshi
Vala lo mnqongo
Musa ukushiya ngaphandle isipho - Fumana Iikhupho and News !
Imeyile yakho johnsmith@example.com
Bhalisa ngoku - Fumana Iikhupho and News !